लघुकथाः अभाव (सरस्वती शर्मा सुबेदी) – KhabarTime
निछाम्म अन्धकारभित्र विलिन भएझैं लडिरहेकी थिई ऊ । उसको वरिपरि उसकै तिनजना छोराछोरी झुमिरहेका थिए । यस्तो लाग्दथ्यो । उनीहरु मात्र त्यस सहरका बासिन्दा हुन् । पुरै संसार उनीहरुका लागि जीउँदो थिएन । उनीहरुलाई पनि कसैका आँखाले जीउँदा प्राणी मान्दैनथे । सबैभन्दा कान्छो उसको छोरा, ऊ पुरै नाङ्गै अवस्थामा देखिन्थ्यो । करिब एक वर्षको त्यो बच्चो सडकपेटीको धुलोसँग खेलिरहेको हुन्थ्यो । कालो वर्णका ती केटाकेटीहरु आफ्नै धुनमा यताउता डुलिरहेका हुन्थे । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्दथ्यो । उनीहरु त्यो सहरका एक्ला बासिन्दा हुन् । धरान बजारको घण्टाघरको घण्टीको आवाजसँग पनि उनीहरु कयौं दिनदेखि बेखर नै थिए । यत्रतत्र छरिएर गुडिरहेका ट्याम्पो र बसहरुको आवाजले उनीहरुलाई छोएकै थिएन पटक्कै ।
सडकपेटीमा हिँड्ने सयौं मान्छेका आँखाहरु उनीहरुका आँखासँग कहिल्यै जुद्दैनन् । उसले त झनै कसैको आँखासँग आफ्ना आँखा ठोक्किए भने पनि आफ्ना आँखालाई हतपत हटाइहाल्दथी । ती छोराछोरीका पितासमेत उसलाई थाहा थिएन । कहिलेकाही उनीहरुको बाबुको अनुसार सम्झन खोज्दा उसका आँखामा कालै अनुहारको छायाँ छाउँथ्यो अगारजस्तै बनेर । रातजस्तै कालो छायाँ । अगार हो की ! रात हो की ! मान्छे हो ! उसले ठम्मयाउनै सकिन ।
अँध्यारोले हैकम जमाएपछि आफ्ना बनेर उसको जवानीसँग भिडन्त खेल्न आउनेहरुको हेक्का पनि कतिको राखोस् । रातैपिच्छे निलाकाला अनुहारहरुको स्मरण गर्न पटक्कै चाहेन उसको मनले । झम्म परेका ठूला आँखाका काला परेली एक पटक उघारी र फेरि चिम्ली । लामो स्वास बाहिर फाली र भित्र हुली ।
सडकको चौबाटोको बिच नितान्त एक्ली महशुश गर्थी ऊ आफूलाई । ऊभित्र अब कुनै भावहरु बाँकी नै थिएनन्, कसैलाई पोखोस् । कसैलाई सम्झेर चसक्क घोचोस् उसको मुटु । कसैलाई सम्झेर एक थोपा आँशु झारोस् । आफ्ना मनका बेदनाहरु अरुसँग पोखोस् । ऊ चाहन्न थिई कसैसँग कुरा गर्न र गफिन । ऊ अन्जानमै तिनवटा छोराछोरीकी आमा बनिसकेकी थिई । आमा बनेर के पाई र के गुमाई ? उसलाई पत्तो थिएन् । ऊ धेरै जसो समय चुम्बकसरि घण्टाघरको पर्खालमा अडेस लागेर टाँसिरहेकी हुन्थी ।
सडकको छेउ हिँड्ने मान्छेहरुको दयाको भिखबाट उसका ती तिनजना स-साना बच्चाहरु जीवित मात्र थिए । माशुभन्दा हाड धेरै देखिन्थे तिनीहरुको जीऊमा । सडकमा हिँड्ने हरकोही मान्छेका मनले भन्थे “कति थेचरो हुँदोरहेछ मान्छेको जात । जस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो शरीर धान्न बाध्य हुने ।
एक दिन उसको चौबिस पच्चीस वर्षे जवानी धरान बजारको सडकको छेउमा लम्पसार परिरहेको थियो । त्यो पनि घन्टाघरको पर्खालमा अडेस लगाएर । आज कसले पैसा दिएछ मोरीलाई दिउँसै खाइछ । पहिलो पुरुषले मनमनै भन्यो ।
यो यसरी दिनदाहडै सुत्ने आइमाई त होइन “के भएछ टाढैबाट एकछिन निहालेर हेर्‍यो र मनमनै भन्यो दोस्रो पुरुषले । तेस्रो पुरुष उसको नजिकै आयो । उसका झ्याम्म परेका परेलीभित्रका काला आँखासँग आफ्ना आँखा जुधाउन खोज्यो उसले । त्यही बेलामा नचिनेझैं गरी फरक्क कोल्टे फेरी ऊ ।
बिहानैदेखि आगोको भुङ्गोजस्तो ज्वरोले रन्किरहेको थियो उसको पूरै शरीर । उसको भरपूर जवानीमा डँढेलो सल्केको महशुश गरिरहेकी थिई ऊ ।
रातको सन्नाटाले पूर्णरुपमा आफ्नो हैकम जमाएपछि ती तिनजना पुरुष त्यहाँ जम्मा भए । कहिल्यै नब्यूँझने गरी मस्त निन्द्रामा थिई ऊ । तिनै जनाले एकैपटक उसको जीउ छामे । ऊ बरफजस्ती चिसी भैसेकेकी रहिछे । थर्कमान हुँदै तिनैजना कुलेलाम ठोके आफ्नो घरतिर ।
कथाकारः सरस्वती शर्मा सुबेदी
नित्याशिवा र दिप्क लिम्बुको आवाजमा रिभेन्ज चलचित्र हजारौ हजारमा (भिडियो सहित)